काठमाडौंबाट १४ हजार डोज खोप गायब! « AayoMail
काठमाडौंबाट १४ हजार डोज खोप गायब!
चीनले ८ लाख डोज ‘भेरोसेल’ सहयोग दिएपछि सरकारले काठमाडौं जिल्लाभरि ६० देखि ६४ वर्षसम्मका नागरिकका लागि जेठ २५ बाट खोप अभियान सञ्चालन गर्‍यो। कार्यक्रम जेठ २९ सम्म सञ्चालन हुने भनिएको थियो। तर, सञ्चालन भएको दुई दिनमै अचानक स्थगित गरियो। कारण बताइएको थियो- खोप अभाव।
तर, यसभित्र लुकेको तथ्य थियो- उपत्यकाका स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिबाट भएको चरम दुरुपयोग, जसका कारण खोप निर्धारित समयअगावै सकिएको थियो।
यसअघि प्राथमिकतामा नपरेका उमेर समूह ६० देखि ६४ वर्षका नागरिकका लागि खोप लगाउने भनिए पनि जनप्रतिनिधि, उनीहरूका आफन्तलगायतले लगाए। तोकिएको उमेर समूहले लगाउनै पाएनन्।
केही स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले पहुँचका भरमा ठूला घरानीया, फाइनान्स कम्पनी, कर्पोरेट हाउसका कर्मचारीका लागि खोप बेचेको आशंकासमेत स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरेका छन्।
उपत्यकाका तीन स्वास्थ्य कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी दुरुपयोग स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका र छुटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाईकर्मीलाई लक्षित गरी ६४ हजार भेरोसेल खोप स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर, खोपका थप्रै डोजका रेकर्ड नै भेटिएका छैनन्।
र, यस्तो अनियमिततामा तानिएका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख हुन् बद्रीबहादुर खड्का।
काठमाडौंमा लक्षित वर्गलाई दोस्रो मात्राक रूपमा प्रयोग गर्न राखिएको ‘कोभिसिल्ड’ र पछिल्लो अभियानमा आएको भेरोसेल पनि ठूलो मात्रामा घरघरमा र निजी कम्पनीमा पुर्‍याएको थुप्रै गुनासो तथा उजुरी विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत पुगेको छ।
खोप दुरुपयोगको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन आयोमेलले खड्कासँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
तर, काठमाडौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोना खोप लक्षित समूहले लगाउन पाएका छैनन्। मनोमानी ढंगले खोप वितरण भइरहेको छ। मापदण्डविपरीत प्रमुख खड्काबाटै दुरुपयोग भइरहेको छ।’
उनका अनुसार प्रमुख खड्काले विभिन्न कर्पोरेट हाउस तथा निजी कम्पनीलाई ठूलो मात्रामा खोप उपलब्ध गराइरहेका छन्। कतिपय कम्पनीसँग लाभ नै लिएर उपलब्ध गराएको आरोप उनकाे छ।
‘दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित वर्गले खोप पाएका छैनन्, तर खड्काले ठूलाबडाका आफन्तलाई घरघरमै खोप पुर्‍याइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्।
सरकारले पहिलो चरणमा वितरण गरेको कोभिसिल्ड पनि खड्काले ठूलो परिमाणमा ‘होल्ड’ गरेर जथाभावी बाँडेको ती अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार खोप जथाभावी वितरणबारे कुरा उठाउँदा खड्काले आफूले खोप शाखा प्रमुख झलक गौतमसँग परामर्श गरेरै वितरण गरिरहेको जवाफ दिने गरेका छन्।
१४ हजार खोपको तथ्यांक छैन
सरकारले ६४ हजार डोज भेरोसेल खोप काठमाडौं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ। जसअनुसार जनस्वास्थ्यले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ३३ हजार २ सय डाेज पठाएको तथ्यांक छ।
त्यस्तै, नगरपालिकालाई २८ हजार डाेज खोप पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयकी ल्याब टेक्निसियन रुपा बुढाथोकी बताउँछिन्।
स्वास्थ्य कार्यालयले महानगर तथा नगरपालिकालाई ६१ हजारहाराहारी डाेज खोप वितरण गरेको थियो।
बाँकी ३ हजारहाराहारी डाेज जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बाँकी रहेको बुढाथोकीले बताइन्।
तर, बिहीबारसम्म जनस्वास्थ्यलाई प्राप्त विवरणअनुसार ४६ हजार ४ सय २५ जनाले खोप लगाएका छन्।
यसरी हेर्दा, प्रष्ट रूपमा साढे १४ हजार खोपको तथ्यांक देखिँदैन।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहले मात्र खोप प्राप्त गरेका छन्। अझै पनि ६०, ६१ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिन सकिएको छैन।
‘काठमाडौंमा ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा १ लाख ६१ हजार नागरिक छन्,’ बुढाथोकी भन्छिन्, ‘हामीलाई ६४ हजार डोज आएको थियो, कसरी खोप पुर्‍याउन सक्नु?’
प्राप्त सूचनाका आधारमा स्वास्थ्य कार्यालयले नै खोपको अनियमियता गरेको हो भन्ने प्रश्न आयोमेलले बुढाथोकीसमक्ष राख्यो।
तर, उनले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अनियमितता नगरेको दाबी गरिन्।
‘हामीले जथाभावी गरेको तथा मापदण्ड बाहिर गएर काम गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘खोप बेचेको भन्ने आरोप लागेको सुनेको छु। कसलाई बेचियो? प्रमाण दिन सक्नुपर्‍यो नि!’
आफूले खोप दुरुपयोग नगरेको दाबी स्वास्थ्य कार्यालयले गरे पनि नगरपालिका तथा महानगरपालिकाबाट खोपको दुरुपयोग भए-नभएको बारे समेत चासो दिएको छैन।
‘काठमाडौंमा ६० वटा केन्द्र छन्। सबै केन्द्रमा हामीले कसरी अनुगमन गर्ने? सकेसम्म लक्षित वर्गलाई नै दिनु भनेका छौं,’ उनले भनिन्।
महानगरपालिका भन्छ- मेयरबाट नै खोपको दुरूपयोग भयो
महानगरपालिकाकाे तथ्यांकअनुसार ६० देखि ६४ वर्षसम्म उमेर समूहका ३९ हजारजनालाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ।
तर, नगरपालिका तथा वडामा गरी २८ हजारहाराहारी डाेज खोप लगाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा केही ठाउँमा खोपको दुरुपयोग भएको भेटिएको महानगरका कोरोना फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर वलीले बताए।
‘हामीले केन्द्रमा अनुमगन गरेका थियौं। तर, लक्षित समूहभन्दा पनि पहुँचको भरमा खोप लगाएको पाइयो,’ उनले आयोमेलसँग भने, ‘खोप वितरणमा ठूला मानिसले पहुँच लगाएका छन्।’
सबै उमेर समूहलाई पुर्‍याउन नसकेको भन्दै महानगरले बाँकी रहेको केही डाेज खोप स्वास्थ्य कार्यालयमा नै फिर्ता गर्न लागेको छ।
विभाग भन्छ– मापदण्डबाहिर गएर खोप दिन पाइँदैन
स्वास्थ्य विभागको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम लक्षित वर्गभन्दा बाहिर गएर खोप दिन नपाइने बताउँछन्।
विभागले ६४ हजार डोज काठमाडौं जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाएको भन्दै गौतमले त्यसको यकिन तथ्यांक खोज्ने बताए।
‘पालिका तथा वडामा कति गयो भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै हेर्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘यहाँबाट वितरण भएपछि सम्पूर्ण अनुगमन तथा वितरणको पाटो जनस्वास्थ्यले हेर्नुपर्छ र रिपोर्ट गर्नुपर्छ।’
‘केन्द्रले गाइडलाइन तथा मापदण्ड बनाउने हो। जिल्ला र स्थानीय पालिकालाई दिएपछि सबै अनुगमन तथा व्यवस्थापन स्थानीय पालिकाले नै गर्नुपर्छ,’ डा. गौतमले भने।
उनले आफूहरूले गाइडलाइनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र पत्र पठाएको भन्दै लक्षित समूहभन्दा बाहिर नजानेगरी कार्यक्रम चलाउनुपर्ने बताए।